छोरा बुहारीको पुनर्मिलनले खुसी भएर रोईन राहुलको आमा, स्मिताको बाबा पनि यति धेरै खुसी। – Onlines Time
February 5, 2021 February 14, 2021 puspaLeaveaComment on छोरा बुहारीको पुनर्मिलनले खुसी भएर रोईन राहुलको आमा, स्मिताको बाबा पनि यति धेरै खुसी।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिगमनकारी कदम चालेको आरोप खेपिरहेका ओलीले देशमा कसैले लोकतन्त्र खोस्न नसक्ने बताए । उनले काम गर्न नपाएपछि संसद् विघटन गरेको पनि प्रष्टीकरण दिए । ‘कसैले पनि लोकतन्त्र खोस्न सक्दैन । लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ । लोकतन्त्रतर्फ कसैले कर्के आँखा नलगाए हुन्छ । किनभने नेपाली जनता सचेत छन् । देश अघि बढ्योबढ्यो’, शुक्रबार काठमाडौंमा भएको ओली समूहको सभामा उनले भने, ‘संसद् विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर बहस निकालिएको छ । जनताले बुझेको कुरा हो–काम गर्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्छ । हाम्रै बलमा संसद्‌मा आएर काम गर्न नदिने र सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने प्रवृत्तिको जवाफ जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नुपर्छ ।’ कोही पनि नाटकबाजको नाटकमा परेर देशलाई गलत बाटोमा जान दिन नहुने ओलीको भनाइ थियो ।
ओलीले आफूलाई गणतन्त्रविरोधी भनेर प्रचार गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘आधा दशक लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि लडेको ओलीले राजतन्त्र फर्काउने घोषणा गर्छ रे । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि पार्ने नसोचे हुन्छ । हामी यसको कार्यान्वयन गरेर जान्छौं ।’
संसद्‌लाई पंगु बनाउन खोजिएपछि चुनावमा जानु परेको ओलीले बताए । ‘संसद्‌लाई ठीक ढंगले चल्न दिनुभएन । संसदलाई पंगु बनाउन थाल्नुभयो । पहिलाजस्तै किनबेचको, समीकरणको, जोडजामको राजनीति गर्न खोज्नुभयो । काम गर्नै नपाउने अवस्था आएपछि ताजा जनादेशका लागि जानुपर‍्यो,’ ओलीले कार्यकर्तातर्फ प्रश्न सोध्दै भने, ‘अस्थिरताका राजनीतितर्फ जाने कि जनताका बीचमा जाने ? अस्थिरतातर्फ होइन, चुनावतर्फ जाऔं । अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो । जनता के भन्छ, अब सबै सुने होलान् ।’
Exclusive: राहुल र स्मिताको सन्तोषले वडा कार्यालय लगेर बनाउन लगाईदिए विवाह दर्ता।
मध्य रातमा पोखरामा फिल्मी शैलिमा यस्तो ! पाखरामा गोलि चल्यो | घाइतेको बयान सुन्दा फिल्म हेरे जस्तो
July 14, 2021 July 14, 2021 onlinestime
आज राती सिरानी मुनी राख्नुस यो एक चिज सात पुस्ता धन अभाब हुनेछैन, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
June 22, 2021 onlinestime